သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● ကျွန်​မနှင့်​ ​​သင်္ချိုင်းများ၊ ထိုသူများ …. | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုနေးသစ် ● ဆေးသား​တွေကွာစပြု​နေတဲ့ ကျ​နော်​တို့စာကြည့်​တိုက်​
မိုးကျော်ဇင် - ကျယ်ဝန်းသော အိမ်ငယ်ကလေးများ (အက်ဆေး)
သွန်းခ - တစ်ရာတန်အစုတ်ရဲ့စကားပြောများ
ခင်မင်းဇော် ● ပုရွက်ဆိတ်ကလေးတွေလိုပါပဲ မောင်
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● အိမ်
ပြည်သစ်ဟန် ● အဘိုးအိုတစ်​​ယောက်​ အထပ်​မြင့်​တိုက်​တစ်​လုံးကို မြိုသွားခြင်း
ကျော်ထင် ● ဝါဆိုပန်းခူး၊ လွမ်းဖူးသူရင်​
ခင်လေး - ပန်းပန်လျက်ပါရှင်
နေ၀န်းနီ (မန္တလေး) - ​ရွှေမန်းသာသနာ
နေနေ ● ကျနော့်မှတ်စု
သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● ကျွန်​မနှင့်​ ​​သင်္ချိုင်းများ၊ ထိုသူများ ….
(မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇
လူ့ဘဝဟူသည်​​ ငြင်းပယ်​ခွင့်​မရှိသည့်​ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးဖြစ်​သလို သင်္ချိုင်းဆိုသည်​မှာလည်း ​ရှောင်​ဖယ်​၍မရ​သော မိုင်​တိုင်​များ ဟု ဆိုရ​လေမည်​လား။ သံသရာတွင်​လည်​​နေသမျှမူ သင်္ချိုင်းများစွာအား ဖြတ်​သန်းကြရမည်​​ဖြစ်​သည်​။ ​နေ့စဉ်​​လျှောက်​​နေကျလမ်းသည်​ပင်​လျှင်​ သင်္ချိုင်းသို့မ​ရောက်​မချင်းသွား​နေရသည့်​အလား နုပျိုမှုများ တဖြုတ်​ဖြုတ်​​ကြွေကျ​ သေဆုံး​နေကြရ​ပေသည်​။
ကျွန်​မတို့ အားလုံးသည်​ သင်္ချိုင်းဟူ​သောစကားရပ်​ အား လူ့သက်​တမ်းတခုအတွင်း တစချိန်​မဟုတ်​ တချိန်​တွင်​ စတင်​သိရှိ ကြ​ပေလိမ့်​မည်​။ ကျွန်​မအ​နေဖြင့်​မူ မည်သည့်အရွယ်က စတင်သိရှိသည်ကိုပင် မ​​​​​​​ပြောနိုင်​​အောင်​သိတတ်​စမှစ၍ သင်္ချိုင်း သို့ ခရီးစဉ်​များအား ​နေ့စဉ်​မြင်​​ နေ​တွေ့​နေခဲ့ရဖူးပါသည်​။ ယခင်က ​​သင်္ချိုင်းမှာ ကျွန်​မတို့လမ်းနှင့်​နီးသဖြင့်​လည်း အသုဘချလျှင်​ ကျွန်​မတို့လမ်းမှသာသွားကြသည်​ကများ၍ဖြစ်​သည်​။ အချို့ဆိုလျှင်​ အသုဘချသည့်​လမ်းဟု​ပင်​​ ပြောစမှတ်​ပြုကြပါသည်​။ ထို့ပြင်​ ဖခင်​ဖြစ်​သူမှာ ကျွန်​မ ၅ နှစ်​သမီးအရွယ်​တွင်​ ဆုံးပါးခဲ့သည်​လည်းဖြစ်​၍ သင်္ချိုင်းဟူသည်​အား ပထမအရွယ်​၏မူလ ဘူတမှပင်​ ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိလှပါသည်​။ ထိုစဉ်​က​တော့ မ​ရောက်​ဖူးခဲ့ပါ။
​ပထမဆုံးအကြိမ်​အဖြစ်​ ကျွန်​မအသက်​ ၁၂ နှစ်​အရွယ်​ခန့်​တွင်​ အ​နေ​ဝေးသည့်​ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ​​တဦးဆုံးပါး၍ သင်္ချိုင်းသို့ အ​မေနှင့်​ အတူလိုက်​ရပါ ​ပို့​ဆောင်ရပါ​သည်​။ ထိုစဉ်​ကာလက လူများ​သေလျှင်​ဓာတ်​ပုံမှတ်​တမ်းတင်​ခြင်း ​ခေတ်​စား​နေသည့်​ အချိန်​ဖြစ်​၍ ထိုအစ်​ကို၏ ရုပ်​အ​လောင်းအား ကျန်​ရစ်​သူ အ​ဒေါ်မိသားစုမှ သင်္ချိုင်းကုန်းတွင်​ပင်​ ဓာတ်​ပုံဆရာ​ခေါ်ယူ၍ မှတ်​တမ်းတင်​ကြပါသည်​။ ကျွန်​မမှာ က​လေးပင်​ဖြစ်​​သော်​လည်း ထိုအပြုအမူအား စိတ်​တွင်းမှ မနှစ်​မြို့ခဲ့ပါ။ ​သေလွန်​သွားပြီးမှ ဘာအ​ကြောင်းတရားများ ထူးဦးမည်​လဲဟု ​တွေးလိုက်​ပါ​သေးသည်​။ အ​မေ၏ပြောစကားအရ အစ်​ကိုဝမ်းကွဲမှာ အလွန်​​ချော​မောသူဟု ဆိုပါသည်​။ သင်္ချိုင်းတွင်​ ဓာတ်​ပုံရိုက်​ရန်​ အ​ခေါင်းဖွင့်​ချိန်​တွင်​​တော့ အနီးပတ်​ဝန်းကျင်​မှ က​လေးများအုံတိုးကြည့် ကြပြီး က​လေးများမှ “မသာက ​ချောလိုက်​တာ” ဟု ​အော်​ဟစ်ပြောဆိုသွားကြသံကြားပါသည်​။
​နောက်​တဖန်​တွင်​​တော့ ကျွန်​မ၏ေ​ဆွမျိုးနီးစပ်​ အဖွား​လေးတဦးကွယ်လွန်​​၍ လိုက်​ပို့ရပါ​သေးသည်​။ ထိုအဖွား​လေးမှာ​ဆွေမျိုးရင်းချာမရှိသဖြင့်​ ဘိုးဘွားရိပ်​သာတွင်​နေရင်း အသက်​ ​(၇၇) နှစ်​ နှင့်​ဆုံးပါးရခြင်း ဖြစ်​ပါသည်​။ ကျွန်​မ မှတ်​မိပါ​သေး သည်​။ အဖွား​လေး​ကွယ်​လွန်​သည့်​ကာလများက နှစ်​လုံးချဲထီများ​ ခေတ်​စား​နေချိန်​ဖြစ်​သည့်​အပြင်​​ မိသားစုဝင်​များမှ​သေဆုံး သူ၏ အသက်​​ဂဏန်းအား ချဲဂဏန်းအဖြစ်​​လိုက်​လံထိုးနေကြသည့်​​ကာလဖြစ်​ပါသည်​။ အဖွား​လေးမှာ​တော့ ​ဆွေမျိုးရင်း ချာမရှိသဖြင့်​ အဖွား​လေး၏အသက်​ဂဏန်းအား နှစ်​လုံးဂဏန်းအဖြစ်​ ထိ်ုးမည့်​သူမရှိပါ။ ကျွန်​မ၏ အေ​မ အစ်မများမှာ​​လည်း နှစ်​လုံးထီဝါသနာ မပါကြ၍ ထိုသို့ထိုးရန်​အသိလည်းမရှိ၊ သတိလည်း မရကြပါ။ကျွန်​မက​တော့ ဟိုဟိုဒီဒီ ကြားဖူးနားဝရှိ​နေ၍ တချက်​သတိထားလိုက်​မိ​သော်​လည်း လူကြီးများအား မ​ပြောဖြစ်​ခဲ့ပါ။
တိုက်​ဆိုင်​စွာပင်​ နောက်​တနေ့တွင်​ အဖွား​လေး၏အသက်​ ​(၇၇) မှာ နှစ်လုံးထီ​​ပေါက်​​ ဂဏန်းဖြစ်​လာခဲ့ပါသည်​။ အဖွား​လေး ၏အသက်​သည်​ ​ပေါက်​ဂဏန်းပင်​​ဖြစ်​​လိုက်​ပါ​သော်​ငြား ​အဖွား​လေးကဲ့သို့ပင်​ ခြွေရံသင်းပင်းကင်းစွာ တိတ်​တဆိတ်​ ထွက်​သွားရရှာပါသည်​။
ကျွန်​မသည်​ က​လေးဘဝတွင်​မူ သင်္ချိုင်းကုန်းအား ထိုနှစ်​​ခေါက်​သာ​ရောက်​ခဲ့ဖူးပါသည်​။ တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်းပြီးစတွင်​​တော့ ကျွန်​မဆယ်​တန်း​ကျောင်းသူဘဝတွင်​ သင်​ကြားခဲ့ရဖူး​သော မြန်​မာစာဆရာ ဆုံးပါး၍ လိုက်​ပို့ခဲ့ရဖူးပါသည်​။ ဆရာမှာ ပညာ ဂုဏ်​၊ ရိုးဂုဏ်​ဖြင့်​​​ ကျော်​​ဇောသူဖြစ်​ပြီး လူအများက​ ​လေးစားရ​သောဆရာတဦးဖြစ်​ပါသည်​။
​ဆရာ့၏​နောက်​ဆုံးခရီးမှာကား အလွန်​စည်​ကား ခဲ့ပါသည်​။ ဆရာ့အား လိုက်​ပို့သည့်​ လူအုပ်​ကြီးမှာ များစွာရှည်​လျားပြီး အားလုံး၏ရင်​တွင်းတွင်​မိသားစုနှင့်​ထပ်​တူ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ နှ​မျောတသ ဖြစ်​ခြင်းများဖြင့်​ စုတ်​တသသဖြစ်​ကြရသည်​။
ဆရာ၏ဆုံးပါးခြင်းသည်​ ကျွန်​မတို့မြို့နယ်​​လေးအတွက်​မူ ကြီးမား​သောဆုံးရှုံးမှုဟု ဆို၍ရပါသည်​။ ​ကျွန်​မ၏​လောဘဖြင့်​​ပြောရလျှင်​ မြန်​မာစာ​ပေ​လောက၏ ပညာတတ်​တဦးဆုံးရှုံးခြင်းဟု ​ဆိုချင်​ပါသည်​။ လူတဦးတယောက်​၏ ဆုံးပါးခြင်းတွင်​​ တစ်​ဦးနှင့်​တစ်​ဦးဆုံးရှုံးမှုတန်​ဖိုးခြင်း မတူကြပါ​ပေ။ ဆရာသည်​သူ၏ ​နောက်​ဆုံးခရီးဖြင့်​ပင်​ ဤသို့​ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်​။
​ကျောင်းပြီး၍ အလုပ်​လုပ်​သည့်​ နယ်​ပယ်​သို့ကူးပြီး​နောက်​မှ ​အသိအဘတဦးကွယ်​လွန်​၍ ရေ​ဝေးသုသာန်​သို့ တခါလိုက်​ပို့ဖူးပါသည်​။ ထိုအဘမှာ ကျွန်​မအလုပ်​လုပ်​ရာအိမ်​၏ ​ဘေးအိမ်​တွင်​​နေသူဖြစ်​ပြီး သားသမီး​မြေးမြစ်​များစွာခြံရံလျက်​ မ​တောင့်​မတ​နေနိုင်​သူဖြစ်​သည်​။ ကျွန်​မအလုပ်​မှ အသွားအပြန်​ထွက်​တိုင်း အဘမှာ အိမ်​ပြင်​ထွက်​ထိုင်​​နေလျှက်​ရှိပြီး အသွား အပြန်​ နှုတ်​ဆက်​​နေရင်း ရင်းနှီးသွားရခြင်းဖြစ်​သည်​။ ထိုစဉ်​က အဘအား အသုဘလိုက်​ပို့ဖြစ်​ရင်း မီးသင်္ဂြိုလ်​စက်​အတွင်း ရုပ်​အ​လောင်းအားသွင်းသည်​ကို ကြည့်​ရင်း၊ တလက်​စတည်းထွက်​လာသည့်​ စက်​​ခေါင်းတိုင်​မှမီးခိုးများအားကြည့်​ရင်း အိပ်​မက်​ပမာ အဘရုပ်​သွင်​နှင့်​ လူဘဝအား အနည်းငယ်​မျှ စိတ်​ပျက်​မိပါသည်​။ အပြန်​တွင်​ ထိုအခြင်းအရာများတဝဲလည်​လည်​ရင်း မျက်​ရည်​စို့မိ၏။ ထို့​နောက်​ မည်သည့်​​အချိ်​န်​တွင်​ ကျွန်​မ၏သံ​ဝေဂများ လွင့်​စင်​သွားသည်​ကိုမူ သတိမပြုမိ​တော့ပါ။ ​သေ ချာပါသည်​။ အလွန်​တို​တောင်းလိမ့်​မည်​သာဖြစ်​သည်​။
ကျွန်​မ​​ဘဝတွင်​ နာ​ရေးပို့ခဲ့ဖူးသည်​မှာသွားခဲ့ရသည့်​ သာ​ရေးထက်​ များစွာနည်းပါးလှပါသည်​။ ကျွန်​မတို့သည်​ အသက်​ကြီး လာသည်​နှင့်​အမျှ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ​မှုနယ်​ပယ်​ကျယ်​​ဝန်းလာကြ၍ သင်္ချိုင်းသို့ အကြိမ်​​ရေများစွာလိုက်​ပါပို့​ဆောင်​ကြရဦး မည်​ဖြစ်​သလို မိမိကိုယ်​တိုင်​လည်း တခေါက်​မျှသွားကြရပါဦးမည်​။ မည်​သို့သွားရမည်​ကို ကြိုတင်​​မသိနိုင်​​ပေ။ မည်​မျှအထိ ဆုံးရှုံးမှုမျိုး ဖြစ်​နိုင်​သည်​ဆိုခြင်းကိုမူ ကျွန်​မတို့အားလုံး ​ပြဆိုနိုင်​မည်​ဖြစ်​သည်​။ လူ​တော်​လူ​ကောင်းများ ​ရေးခြစ်​ခဲ့​သော သမိုင်းဟူသည်​ အထပ်ထပ်ပြိုလဲသွား​သော သက္ကရာဇ်​​​များကြား ​တောင့်​တင်းခိုင်​မာသည့်​ စံနမူနာများအဖြစ်​ တွင်​ကျန်​ရစ်​​နေ​လိမ့်​​​ပေမည်​။ေ​တွးချိန်ချင့်စရာပင်။​​​ မလွဲမ​သွေသွားရမည့်​ ဤခရီးတွင်​ ကျွန်မတို့ ​မည်​သို့သွားကြပါမည်​နည်း။
Tags: သူသူမေ (မော်ကျွန်း)
သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● အမေ၊ လောကဓံတရားနှင့် ဖြူစင်သော ထမင်းလုပ်ကလေးများ … (0)
သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● အဖေနှင့် ကျမကြား ကာလယန္တရား (0)
သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● အတိတ်​မှန်​ကွဲစများမှတဆင့်​ (0)
သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● လိမ့်​​နေ​သော​ကျောက်​တုံး​လေး (0)
သူသူမေ (မော်ကျွန်း) ● စတစ်ကာလေးများ (0)